Banaanbax looga so Horjeedo Sanadiqda Somaliland keentay Gobalka Sanaag oo Haaaftimo kadhacay (Sawiro) – Radio Daljir
Noofember 8, 2017 6:40 g 0
Magaaladda Haaaftimo ee Gobalka Sanaag waxaa kadhacay maanta banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo olalaha doorasho ee uu maamula somaliland kawado qaybo kamid ah gobalka sanaag ee Puntland.
Shacabka ayaa watay Calanka Somaaliya ,iyago sheegay in marnaba aysan Raali kanoqonayn talaabooyinka ay somaliland gobalka kawaddo ,iyago ugu baaqay somaliland in aysan so faragalin gobalka sanaag.
Shacabka oo wajiyadooda laga dheehan karayn caro xoogan ayaa ugu baaqay madaxda Xisbiyadda in aysan dhulka sanaag faraha laso galin hadii kale ay la kulmi donaan dagaal xoogan oo ay qadayaan dadka degaanka u dhashay.
Banaanbaxa maanta kadhacay Haaaftimo ayaa kusoo beegmaya xili shalay Barlamaanka Puntland dood kulul ka yesheen faragalinta qaawan ee maamulka Somalilan ku hayo dhulka Puntland ,iyago guddi u saaray xaaladda amaan ee xuduudaha Puntland.
Hoos kadaawo sawiradda Bananbaxayaasha